Ngubani uYesu Kristu?
Umbuzo: Ngubani uYesu Kristu?
Impendulo: Ayifani nombuzo “IIngaba uThixo ukhona na?” bambalwa abantu ababuza lombuzo wokuba ingaba uYesu Kristu ukhona na. Sele iyinto eyaziwayo eyokuba uYesu wayengumntu ngenene owayehamba emhlabeni wakwaSirayeli ngeminyaka yama- 2000 eyadlulayo. Ingxoxo iye iqale xa kufunwa ukuqondwa ngobuyena bukaYesu. Phantse zonke iinkolo ezingundoqo zifundise ukuba uYesu wayengumprofeti okanye ititshala elungileyo okanye indoda eyayinobuThixo. Ingxaki yile iBhayibhile yona isixelela ukuba uYesu wayengaphaya komprofeti, utitshala olungileyo,okanye indoda enobuthixo.